Kuthetha ukuthini ukuphupha inqwelo-moya ewayo? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Ngokuchasene noko kunokuba kubonakala ngathi, ukuphupha ngenqwelomoya ewayo ayisiyonto imbi, oko kuthetha ukuba izinto ezintle ziyeza ebomini bakho.
Sisoloko sizama ukutolika iphupha ngeendlela ezahlukeneyo, cinga ukuba awuzange ubhabhe kwaye ukuhambo olucwangcisiweyo, kunokwenzeka ukuba uxinzelelo lwakho lube ngoyena nobangela wephupha lakho.
Ukuba ayisiyiyo into yokuba ubukwinqwelo-moya yokuqala ocwangcisiweyo kwaye ubenephupha lokuba inqwelomoya izakuwela, yithathe lula, kuba njengoko besitshilo ngaphambili lilizwi elihle. Ngaba ukulungele ukufumanisa ukuba kuthetha ntoni kanye kanye?
1 Iphupha lendiza ewayo
2 Ukuphupha ubona ingozi yindiza
3 Ukuphupha usweleka kwingozi yenqwelomoya
4 Isiphelo sokuphupha kwentaka ewayo
Iphupha lendiza ewayo
Oku kubonisa inkqubela phambili kwezentlalo, inokubonisa impumelelo yakho emsebenzini, ukuthengwa okunje ngemoto, indlu, njl. kulungile. Qhubeka kwindlela enye apho uya kufumana indawo oya kuyo ngokuchanekileyo.
Ukuphupha ubona ingozi yindiza
Ukuba ukhe wakubona ukungqubana kwenqwelomoya, oko kuthetha ukuba uyakuxhamla emsebenzini okanye kwiprojekthi oyenzayo.
Isenokuba kukukhuthazwa kwemisebenzi okanye oko kukunyusa ufuna kakhulu. Ikwanokumela ukwamkelwa kobungcali.
Ukuphupha usweleka kwingozi yenqwelomoya
Eli lelinye lamaphupha amoyikayo umntu anokuba nawo xa ephupha ukuwohloka kwenqwelomoya, kodwa ke yinto elungileyo kakhulu ngokuchasene noko unokucinga ngako. Ukuphupha usweleke kwingozi yenqwelomoya kubonisa impilo entle okanye ubomi obude obugcwele uloyiso ngaphambili.
Isiphelo sokuphupha kwentaka ewayo
Okokuqala, ndingathanda ukuthi amaphupha abandakanya iingozi ngokubanzi anokuvela ngenxa yomothuko kwaye ke oko kunika amaphupha aphindaphindwayo.
Umzekelo, ukuba uphupha amatyeli aliqela malunga nokuwa kwinqwelo-moya, ingozi yemoto okanye abanye kwaye unohlobo oluthile lwe-phobia, kuyacetyiswa ukuba ufune uncedo lobuchwephesha, ukuze ube unokuhamba ngeyona ndlela intle. Ukuba awunalo uloyiko okanye uhambo olucwangcisiweyo, kusenokwenzeka ukuba ixesha lakho lethamsanqa lisondela.
Hlala nje ujonge, ndibona amaphupha aneempawu zokuba sidlulile, kwaye ndisebenzise amathuba.